IINDIDI ZEWINDOWS (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGQIBELA) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Iindidi zeWindows (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Wamkelekile kwiindidi zethu zeefestile zesikhokelo sokuyila, kubandakanya uninzi lwezinto ezithandwayo zesakhelo, izitayile, iindleko kunye neempawu.
Iifestile ziyinxalenye entsonkothileyo kuso nasiphi na isakhiwo okanye ikhaya kunye nento ebalulekileyo xa kusenziwa isitayile sangaphakathi nesangaphandle. Iifestile zivumela ukukhanya nomoya ungene ekhayeni kwaye kuxhomekeke kwisitayile kunye nokusebenza, iiwindows zenza ukubonwa okumangalisayo.
Abanini bamakhaya banokhetho oluninzi xa bekhetha iifestile, kwaye banokwenza ngokusesikweni phantse nayiphi na iwindow ukuze ihambelane nesimbo yoyilo lwamakhaya abo.
Ukukhetha iWindows Window efanelekileyo
Iindidi zeNdlu yeWindows
IWindows enye engabodwa
IWindows ezimbini zeHung
Iglasi yeBhloko yeWindows
Izinto zeSakhelo se Window
Amandla eWindows kwiWindows
Iglasi yokuHamba ephantsi
Solar Ubushushu Gain Coefficient
Iglasi yamandla aphindwe kabini
Iklasi yokuDlulisa iZandi ePhakamileyo (STC)
Ezona ntlobo ziqhelekileyo zoTshintsho lweWindows zifakiwe
Iindleko zokuTshintsha indawo yeWindows kwiNdlu
Yintoni echaphazela iindleko zeNew Windows Home?
Iindleko zefestile ngohlobo
Ixabiso leMpahla yeNdawo yeNdleko
Indlela yokulinganisa iWindows
Uyilinganisela njani iVidiyo yeWindows
Iindidi ezininzi zeefestile zekhaya lakho zibandakanya ukubuyisela iifestile kunye nokukhethwa kweewindows ezintsha. Nokuba uphanda ntoni, ukwaziswa malunga neendidi, izixhobo, kunye neendleko zokufaka ekugqibeleni konga imali kunye nolungiso lwexesha elizayo kwiifestile ezinesiphene okanye umsebenzi ongekho mgangathweni.
Iifestile ziyabiza kwaye ngokufuthi umsebenzi wokuphucula amakhaya abaninimzi banokuzenza. Kubalulekile ukwazi isifaki sefestile kunye nokujonga izingqinisiso kunye namaxabiso.
Esi sikhokelo sifundisayo malunga neendidi zeewindows sikunika ulwazi oludingayo xa ukhetha iifestile zekhaya lakho elitsha lokwakha okanye xa usenza isigqibo sokutshintsha iifestile zekhaya lakho esele likho.
Ukukhetha iifestile ezifanelekileyo ngexesha lolwakhiwo olutsha okanye ukufaka endaweni yazo kubandakanya ukuqinisekisa ukuba iifestile ziyanceda ukugcina ingaphakathi lekhaya lakho lizolile, ukuthintela iidrafti, kulula ukuzicoca, ukulingana isitayile sendlu yakho kunye nokubonelela ngezibane ezaneleyo.
Ukufumana iifestile ezilungileyo kuthetha ukukhetha iintlobo ezisebenza kakuhle kuyilo lwasekhaya nakwimozulu yengingqi. Iifestile ezinyamezelayo ngokutshisa, kushushu, nangasemazantsi kwimozulu yasentlango zahlukile kwiifestile eziza kuvezwa kukufuma okuphezulu kunye nemvula enkulu kwiindawo ezishushu.
Isinyathelo sokuqala kukumisela iintlobo zeefestile ezifunekayo kwisitayela sekhaya kunye neemfuno. Apha ngezantsi kukho iindidi ezininzi zeewindows, ukumiselwa kwazo, kunye nenjongo yazo.
Ukufunda malunga neendidi zeefestile ezikhoyo kunye nokwenza uluhlu lwezinto onokuzenza ezihambelana neemfuno zekhaya lakho kubonelela ngendlela yokunciphisa ukhetho.
Ukwazi iindidi akuncedi nje ekukhetheni iifestile ezilungileyo kodwa kukwavula nokhetho, ukuze ungaphoswa lithuba elikhethekileyo lokuphucula iimpawu kunye neempawu zekhaya lakho.
Ezona ntlobo zefestile zixhaphakileyo zibandakanya iifestile ezizodwa ezixhonyiweyo ezifumaneka kumakhaya amaninzi.
Ezi windows zibandakanya imitya emibini eyahlukeneyo (amacandelo) okanye iglasi yokwenyani kwisakhelo sayo kwaye ivule kuphela ngokushenxisa umbhinqo ukusuka ezantsi.
Ibhanti ephezulu ihlala imile. Ibhanti esezantsi ivula ngekona yokucoca.
Ezi windows zilungile kwizithuba ezimxinwa, kwaye isitayile sabo sodidi oluhamba kakuhle sihamba namakhaya obuhlobo bobukoloniyali, ifama, kunye nezobugcisa.
Ngokufana neewindows ezixhonywe ngaphandle, iifestile ezixhonywe kabini zinokuvula ngokushenxisa umbhinqo ukusuka ezantsi okanye ezantsi ukusuka phezulu.
Zombini i-sash ephezulu kunye nezantsi inyuka isihla kwaye ihlala phezulu icoca. Iifestile ezixhonywe kabini zibiza kakhulu kunezo zixhonywe ngeewindows kodwa zikwasebenza ngakumbi kwaye zilungele.
Bavumela ukuhamba komoya okungcono xa zombini ii-sashes eziphezulu kunye nezantsi zivulekile. Umoya unokungena ngaphakathi kuvulo olungezantsi kwaye uphume ngaphezulu. Iifestile ezindala ezixhonywe kabini zihlala zivulekile ngokusetyenziswa kwetyathanga elinobunzima kodwa namhlanje zigcinwe zivulekile ngemithombo.
Iisilayidi ezityibilikayo ziyafana nokucula kwaye zixhonywe kabini, kodwa zityibilika ukusuka ngapha nangapha kwiindlela ezithe tyaba ezingasentla nezisezantsi.
Ezi windows zivule isiqingatha sokungena komoya kunye nokungenisa umoya.
USwitzerland owazalwa eLe Corbusier, ( https://www.britannica.com/biography/Le-Corbusier Umakhi owaziwayo onobuchule kunye nomcwangcisi wesixeko, ezi windows zikhethe ukuhamba ngokuhamba nkqo ukuya nkqo.
Iifestile ze-egress kumagumbi angaphantsi kunye namagumbi okulala angaphantsi afakwe izilayidi ngenxa yokuvulwa okukhulu kunye nokusetyenziswa okulula.
Ukuba ikhaya lakho libandakanya umbono omhle wokhula lwamahlathi ashinyeneyo okanye unxweme lolwandle olunentlabathi ngamagagasi aqhekezayo, ifestile enkulu yemifanekiso yeyona ndlela ifanelekileyo yokonwabela umbono.
Iifestile zemifanekiso azivuli kwaye azinazinto ezibonakalayo ezinje ngesakhelo okanye izixhobo zekhompyutha eziphazamisa ukubonwa okuhle.
Ziyaziwa njengeefestile ezinqamlezileyo kwaye zifunyanwa kwizindlu eziluhlaza, iicawa, okanye amakhaya anemigangatho esemgangathweni ukuya kwindonga yeglasi.
Ifestile ye-bay, ehlala imile njenge-hexagon, iphumela ngaphandle kwekhaya. Iifestile ze-Bay zongeza ubungakanani kwigumbi kwaye zizisa ubuhle kunye nokunethezeka kuwo nawuphi na umxholo woyilo.
Iifestile ezinkulu zebheyi zivumela umbono wepanoramic wangaphandle, kwaye ungeze ukukhanya okungaphezulu ngaphakathi ngelixa uguqula ingaphandle lekhaya elinomtsalane.
Umgangatho weefestile zebhayingi zesilingi udala indawo yezityalo, kunye neebheyi ezinkulu ezinobunzulu obubanzi zinokubandakanya indawo yokuhlala yokufunda kunye nokugcina ngaphantsi.
Ngamanye amaxesha, iifestile zebay zingabandakanya iipaneli zangaphandle ezivulekileyo. Amakhitshi kunye namagumbi osapho ahlala eneewindows.
Ifana nefestile ye-bay, ifestile yesaphetha ineepaneli zeglasi ezinemiphetho egosogoso, apho isakhelo sefestile nganye sihlangana khona.
Oku kudala i-arch kwaye ihlala ibandakanya iifestile ezine. I-Sashes inokukhetha kwaye yongeza amandla okuvula enye okanye zonke iifestile zokujikeleza komoya.
Iifestile zokugoba zihonjiswe ngakumbi kunewindow ye-bay kwaye zibonelela ngendawo yeshelu ngaphakathi komgca wefestile ogqibeleleyo kwizityalo zendalo.
Ukongeza umaleko wokuvimba iidrafti kunye nokukhuselwa kwimozulu ebandayo, faka ifestile yesakhelo kwisakhelo esinye njengefestile esele ikho.
Iifestile zesaqhwithi zezangaphandle kuphela kwaye zihlala zisetyenziswa kwindawo ezinengqele, ezinemozulu ebandayo enezaqhwithi rhoqo.
Uninzi lwamagaba okuhlala elunxwemeni lunefestile kunye neendawo ezifumana ikhephu elininzi ebusika. Isithuba esiphakathi kwefestile yoqobo kunye nefestile eyongeziweyo yenza ubushushu obungaphezulu.
Rhoqo ifunyanwa ngaphezulu kwesinki yekhitshi, iifestile zegadi zifumana igama lazo ekusebenziseni kwazo njengendawo yezityalo kunye namayeza.
Benza i-mini-greenhouse ngokuphuma eludongeni lwekhitshi ukufunxa ukukhanya kwelanga okufunekayo kwizityalo. Ifestile yegadi eneentyatyambo kunye nemifuno luluncedo kunye nokongeza ukonwabisa ekhitshini.
Iifestile zegadi zenziwe ukuba zomelele ukumelana nomoya kunye nokushenxiswa kukushukuma komhlaba okanye ikhaya elisahleli lizinze.
Iifestile zokwenza umngxunya zinehenjisi ephezulu ukuze zikwazi ukuvula kwaye zithambekele emazantsi. Nje ukuba ithambekile, ifestile ifana nomsindisi kwaye ithintela imvula nekhephu ekungeneni ekhaya.
Ngokuvula ngaphandle, iifestile zesithunzela azithinteli ndawo kwigumbi, kodwa naziphi na izityalo okanye izithintelo ezingaphandle kwekhaya ziya kuthintela ukufakwa kwefestile yomsitho. Iifestile zisitya zibonelela ngokugcina ubushushu kunye namandla.
Ngamagophe athambileyo kunye noyilo oluhonjisiweyo, iifestile ezi-arched, ezikwabizwa ngokuba zii-radius windows, zonyusa umda wokubamba umzi kwaye ulondolozo olusezantsi.
Iifestile zeArched zongeza uyilo kunye nomdla kwiincopho zeengcango kunye neefestile, kwaye zinokusebenza njengewindows ezimeleyo.
Zininzi izinto zoyilo ezinokubakho ezinje ngesiqingatha sesangqa, isangqa sekota, isangqa esipheleleyo, ii-ovals, kunye ne-elliptical. Iifestile ezi-arched zinokuqulatha iglasi engenanto, iglasi eyahlulwe ngamagridi, kunye neglasi enamabala.
Amakhaya exesha lama-Victori aquka ukuhonjiswa okuhonjisiweyo kwaye kuhlala kubandakanya iiwindows. I-Spanish, iMeditera, kunye ne-stucco amakhaya enza iiwindows kwaye zibandakanya izinto zoyilo ezinje ngeearchways, imigca egobile kunye nophahla lweceracotta.
Iifestile zeTransom azivuli, zisebenza njengefestile yokuhombisa efumaneka kumakhaya amaninzi amahle. Iitransom ziqhekeza indawo eludongeni ngeefestile ezimbalwa okanye umsebenzi wokubonelela ngokukhanya okufana nesitali seshawari kufutshane nomphezulu wodonga.
Umgca okanye iphethini eyenziwe kwi-transom windows yenza uyilo olwahlukileyo kwaye ihlala ibekwa phakathi rhoqo windows ukubonelela ngakumbi ukukhanya.
Iitromu zivela kwiimo ezininzi ezinje ngohlobo lwefeni, isangqa, isikwere, okanye uxande. Umnyango wangaphambili owenziwe ngesikwere uvumela ulwamkelo olunomtsalane kulo naliphi na ikhaya.
Iifestile ze-Casement zineehenjisi kwelinye icala ngokungathi ngumnyango, kwaye zivuleke ecaleni kusetyenziswa isikrweqe sangaphakathi ngaphakathi kwebhanti nganye. Zenziwe ngeglasi eqinileyo kwaye zinezikrini ezikhethiweyo ezixhonywe ngaphakathi ukwenza ukucoca kube lula.
Kwimozulu apho kukho umoya ogqithileyo, iifestile ze-casement zenza uphawu lwemozulu olunikezela ukhuseleko oluhle kuyilo kunye nomoya obandayo.
Iifestile ze-Casement zifuna ulondolozo kwiihenjisi nakwiitywina njengoko zibonakaliswe ngakumbi kwizinto kuninzi lweefestile. Bahlala bebonelela ngokuhamba komoya ngakumbi kunezinye iifestile.
Iifestile zesibhakabhaka zilungile ukongeza ukukhanya ekhayeni lakho xa kungekho sithuba saneleyo sodonga lweefestile.
Izibane ezisesibhakabhakeni ziifestile ezakhelwe eluphahleni lwendlu enombono omangalisayo wesibhakabhaka. Ezi windows ziluncedo zifakela kufana nophahla lwentamo kwaye kunqabile ukuba zifune ukulungiswa.
Izibane ezikhanyisa esibhakabhakeni zibonelela ngokukhanya kwendalo okungena kwigumbi njengokulungiswa kokukhanya kunye nokugcina amandla. Bancedisa nayiphi na indlela yoyilo kwaye kulula ukuyifaka.
Ukuba uphahla lwendlu yakho luyagquma, kuthintela ukufakwa kwesibane esibhakabhakeni, ukukhanya kwetani kukhetho. Izibane ezisesibhakabhakeni zeetonela ziguquguqukayo, zibanzi, iityhubhu ezisongelwe ngemiqadi kunye nophahla, kwaye zinombala ocwebezelayo, ngezinto zentsimbi.
Ukukhanya okuvela ngaphandle kufakwa ngumphandle ocacileyo ophahleni kwaye kugobe kwitonela ukukhanyisa isiciko esineqabaka eluphahleni. Njengefestile yesibane esibhakabhakeni, izibane zetonela zibonelela ngokukhanya kwendalo kwaye zivumela ukukhanya okwaneleyo kokukhanya kobusuku kwimimandla enezibane zasesitratweni okanye eminye imithombo yokukhanya. Bona ngokwahlukileyo Iindidi zeefestile zesibhakabhaka kweli phepha.
Ifestile ye-hopper yifestile ye-sash eyodwa eyilelwe okunje ngefestile yecasement, kodwa ivula ngaphakathi endaweni yangaphandle njengefestile yecasement. Iihenjisi zisezantsi ukuze iwindow ithambeke ivuleke phezulu.
Iifestile zeHopper zine-crank kwaye zisebenzisa kakuhle indawo ezixineneyo ezinje kwigumbi elingaphantsi okanye kwigumbi lokuhlambela. Njengefestile ye-casement, iifestile ze-hopper zibonelela ngokutywinwa okuqinileyo xa kuvaliwe ukukhusela emoyeni obandayo kunye nakwiidrafti.
I-crank yesandla kulula ukuyisebenzisa kwaye, kunye neehenjisi, ifuna ulondolozo lwamaxesha ngamaxesha. Ngokuvula ngaphakathi, iifestile ze-hopper ezifanelekileyo kwizithuba ezimxinwa ezinje ngetreyini ngaphandle kwekhaya elinendawo encinci.
Ukubonelela ngokukhanya ngakumbi ekhayeni kunye nobuhle bobuhle, iifestile zesitayile, ezifanayo kwiifom ze-transom, ziza ngeendlela ezininzi kunye nezitayile.
Ezi festile zimile zimile njengee-octagoni, ii-ovals, izikwere, nangaphezulu kwaye zinokuba neglasi okanye iglasi ecacileyo yoyilo, ipeyintiweyo, okanye eyenziwe ngentsimbi.
Iifestile zeAccent zihlala zongezwa kwiqela leewindows, ukwenza isitayile esikhethekileyo.
Ezi ntlobo zeefestile zisebenza kakuhle kwiindawo ezincinci ezinjengeendawo zokuhlambela, iindawo ezinkulu zokungena, namagumbi okuhlamba. Iifestile zeAccent azivuli.
Ibonwa rhoqo kumagumbi okuhlambela ajonge ibhafu okanye iJacuzzi, iiglasi zebloko zeefestile ziibhloko zeglasi enqabileyo okanye kuyilo olwakhiwe kwiglasi.
Luhlobo lwewindows egxininisa kwaye yongeza ukukhanya kodwa zibonelela ngasese.
Iibhloko zebloko zeglasi zikhuselekile ezenziwe ngeglasi engqindilili, eqinile phantse ukuba ayinakuphuka. Banikezela ngeendlela zokuyila ezinemfashini, kwaye banikezela uyilo oluninzi kwaye bagqibezela ukwanela naliphi na igumbi.
Iifestile zeJalousie zinee-slats ezifanayo ezenziwe ngeglasi, isinyithi, okanye iseti eyenziwe ngomthi kwisakhelo. I-slats, okanye i-louvers, zihlala kumkhondo ukuze zijike zivule kwaye zivale ngokulinganayo ngokusetyenziswa kwesikratshi ngesandla esivumela umoya ukuba uqukuqele ngelixa ugcina imvula nekhephu ngaphandle.
I-slats inokuvalwa ngokupheleleyo, ilele phantsi. Ngelixa iijali zewallousie zivumela ukuhamba komoya okuninzi, zixinene kwaye aziboneleli kakhulu ngombono.
Iifestile zaseJalousie zazidumile kumakhaya enkulungwane yeshumi leminyaka kunye neentengiso ezazityiwa ngeminyaka yoo-1940 xa abanini khaya bezisebenzisa ukufaka iivaranda zabo zangaphambili. Ezi windows zakudala azikhuselekanga xa kuthelekiswa neewindows eziqhelekileyo.
Uninzi lwabahloli bezakhiwo bafuna i-egress windows kumagumbi angaphantsi njengenxalenye yokhuseleko. Ukuba imeko engxamisekileyo ibinokwenzeka njengomlilo okanye ukuvuza kwegesi okuthintela ucango olukhokelela ngaphandle, ifestile egress ibonelela ngandlela yokuphuma.
Ngamanye amaxesha ukufaka ifestile yokuphuma kufuna ukumbiwa komhlaba ngaphandle kwekhaya apho ifestile ifakwe khona.
Iifestile ze-Egress zikwavumela abasebenzi ukuba bangene ekhayeni ngexesha likaxakeka enjengokuzamazama komhlaba. Zongeza ukukhanya okufuneka kakhulu kumagumbi angaphantsi kunye nomoya ongenisa umoya ukuthintela ukungunda kubumdaka obugqithisileyo.
Clerestory ligama elivela kwigama lesiNgesi eliphakathi elithi clerestorie elithetha ibali elicacileyo.
Iicawa kunye neechedhedral zisebenzise eli gama ukuchaza inqanaba eliphezulu lendawo engcwele kwaye namhlanje, iifestile ezicocekileyo zimela iwindow ende yoxande okanye uthotho lweefestile ezincinci ezibekwe kufutshane nophahla lwegumbi ukongeza ukukhanya nokugcina ubumfihlo.
Abahlolokazi abahlambulukileyo bagcina indawo eludongeni ngelixa bekhuthaza intabalala yokukhanya kwendalo.
Iifestile ezicocekileyo zifumaneka kumakhaya abucala nakwizakhiwo zorhwebo ezinjengeelayibrari, amagumbi enkomfa kunye neeofisi zikagqirha. Iindawo ezinkulu ezibandakanya amabala emidlalo, iindawo zeebhasi, kunye neendawo zokuzivocavoca umzimba zisebenzisa ezi windows ukukhanya kunye nokungenisa umoya ngaphandle kweendlela zababukeli nezixhobo.
Ukupasa ngefestile yifestile esikwe eludongeni phakathi kwamagumbi amabini, okanye udonga phakathi kwendlu kunye nepatio engaphandle. Dlula kwiifestile ezivela kumaseva, kwizicakakazi, nakwizinto zokungcamla, okwenza kube lula ukuhambisa ukutya.
Ukupasa ngefestile ekhitshini evula ipatiyo kulungile ekusebenzeni isidlo sasemini, iziselo kunye nokutya okulula. Ngenye indlela, ukudlula kunokuba eludongeni phakathi kwekhitshi kunye negumbi lokutyela.
Ukudlula apho kune-countertop kumacala omabini ukubeka iitreyi kunye neepleyiti zokutya. Dlula kwiifestile ezingena ngaphandle, ube neefestile ezimbini zeefestile ezityhala ngaphandle kwaye, xa zityhalelwe zivaliwe, zinokutshixa ukhuseleko olongeziweyo.
Nokuba zonke iintlobo zeefestile, abaninimzi abakha ikhaya elitsha, okanye abanekhaya esele likho, banokufumanisa ukuba bafuna uhlobo oluthile lwefestile olungafumanekiyo ngentengiso.
Iifestile zesiko kubandakanya intlanganiso kunye nomyili oyingcali kunye nokwenza imilo, isitayile, ubungakanani, kunye noyilo lwewindow yesiko okanye iiseti zeewindows.
Xa usebenza nomyili wewindow yesiko, ukhetho lubandakanya uninzi lwezinto onokukhetha kuzo ezinje ngeentlobo kunye nobukhulu bokubumba ukhuni, i-fiberglass okanye iifestile ze-vinyl, iimilo ezikhethekileyo, ii-angles, ii-accents kunye nezixhobo.
Ngelixa uhlobo lwefestile lumele ukusebenza kunye noyilo, izinto ezisetyenziselwa isakhelo zinempembelelo enkulu kubude bexesha kunye nokusebenza kakuhle, okuchaphazela ubushushu kunye nokuhanjiswa okubandayo, ixesha lokuphila kweefestile, kunye neemfuno zokugcina.
Izakhelo zefestile ngumqolo wobume, kwaye emva kokukhetha isitayile sakho, izinto zesakhelo kufuneka zibe sesona sigqibo sibaluleke kakhulu.
Ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwesakhelo sefestile kunye nobungakanani linyathelo elibalulekileyo xa uthenga iiwindows. Apha ngezantsi kukho iindidi eziphambili zezinto zefreyimu kunye nokusetyenziswa kwazo okucetyiswayo.
Iifayile zefestile zeVinyl zivela kude kangangeminyaka, zibenza babe nokhetho olomeleleyo nolufikelelekayo kwikhaya lakho. Iifreyimu zeVinyl zenziwe nge-PVC zikwasetyenziselwa izinto ezininzi zasekhaya ngexesha lokwakha, kubandakanya imibhobho yamanzi. Ezi ndidi zimbini zezinto ze-vinyl zicocekile okanye zintombi vinyl kunye nevinyl ehlaziyiweyo.
IVirgin vinyl yomelele kakhulu kwaye iya kuhlala ixesha elide kune-vinyl ehlaziyiweyo kodwa iyabiza kakhulu. I-vinyl ehlaziyiweyo ayomelele kodwa ixabisa kancinci.
Zonke iifestile ze vinyl zisebenza ngamandla ngokusekwe kwi-Energy Star rating, kwaye xa ivaliwe yenza uphawu olungena moya luthintela uyilo.
IVinyl kulula ukuyicoca kwaye ayifuni ukupeyinta kwaye inenqanaba eliphezulu le-UV ukukhusela umhlwa okanye ukonakala elangeni. Ezi zinto zivumela ubomi be-15 ukuya kwi-20 yeminyaka kwaye zinike nembuyekezo kutyalomali phantse lwe-75%.
Izakhelo zefestile ye-fiberglass eneneni yenziwe ngokudityaniswa kwemicu yeglasi kunye nentlaka ye-polyester. Amanqaku okuthengisa enza ifreyimu ye-fiberglass yeefestile zibandakanya ukulinganiswa kwamandla okuphezulu kakhulu ngenxa yokuqhuba okuphantsi kwe-thermal-ukudlulisa okuphantsi kobushushu nengqele.
Izakhelo zefestile ye-fiberglass zezona zinto zinamandla xa kuthelekiswa nezinye izinto ezinje nge-vinyl kunye neenkuni kwaye azizukugoba okanye ukujija. Ngelixa izakhelo ze-fiberglass zifumaneka ngemibala emiselweyo, zinokupeyintwa kwaye zibe nomphezulu ovumela ipeyinti ukuba ihambelane kakuhle. Baye bangene kwimithi yokwenyani ejonge ukugqitywa.
Ezinye izakhelo zefestile ye-fiberglass ziza zizaliswe ngumoya we-foam ukwenza umlinganiso ophezulu we-thermal kwaye nangona zibiza kakhulu kunezinye izinto, zibonelela ngokulondolozwa kwamandla okungcono.
Funda ngakumbi ngumahluko we IVinyl vs windows ifayibha yeglasi Apha.
Iifayile zeAluminiyam zefestile zomelele kakhulu, zivumela izakhelo ezincinci kunye nezinto zokubopha. Oku kubonelela ngendawo yeglasi ebonelela ngobubanzi bokujonga ngcono kunye nelona nani likhulu lokukhanya.
Izakhelo zeAluminiyam zivumela iintlobo ezininzi zokugqitywa kwemibala ezifakwe kumzi-mveliso ezihlala ixesha elide kwaye zomelele. Ngelixa ialuminium inganyangeki ukufuma, ukonakala kwezinambuzane, kunye nokubola, izakhelo zealuminium ziyanda kwaye zisebenza kunye namaqondo obushushu agqithisileyo avumela amatywina ukuba akhululeke.
IAluminiyam ayiboneleli ngereyithi elungileyo yokushisa, kodwa iifreyimu ezifakwe ialuminium ezinesakhelo somthi esongelwe ngesikhumba sealuminium esinikezela ngokugquma okungcono.
Nangona iifestile ze-vinyl kunye neenkuni zisebenza kakuhle kune-aluminium, iifreyimu zefestile ezenziwe nge-aluminium zinika iipropati ezibonakalayo zokucima ingxolo.
Izinto ezidityanisiweyo ezenziwe kwizinto ezahlukeneyo kunye nezakhelo zeefestile ezenziwe ngokudityaniswa zenziwe ngokudibanisa izinto ezinjenge-resin kunye nefayibha yeglasi. Ezi zinto zenza i-bumper yemoto kwaye zibonelele ngento eqinileyo kodwa eguqukayo.
Izakhelo zefestile ezidityanisiweyo zijongeka kakhulu njengeefreyimu zomthi, ngaphandle kokuba azibandakanyi ulondolozo rhoqo lwesakhelo sefestile somthi. Ukudityaniswa, njenge-vinyl kunye nealuminium, yinto yokugcina esezantsi yeefreyimu zefestile kwaye iza ngemibala emininzi.
Kumakhaya amadala okanye asembalini, iizakhelo zeefestile ezihlanganisiweyo zibonelela ngeewindows ezinokutshintsha ezinokulinganisa iifreyimu zeenkuni zangaphambili ngaphandle kolondolozo. Abanini bamakhaya bathanda ukubanakho ukubonakala kweefestile ngaphandle kwemicimbi eza neenkuni zokwenyani.
Nangona izakhelo zeefestile zomthi zintle kwaye zibonelela ngokugquma kakuhle, ziza neemfuno zolondolozo.
Ipeyinti okanye ibala kufuneka lihlaziywe rhoqo, kwaye iinkuni kufuneka ziphathwe ukumelana nokufuma kunye nokubola. Umthi utsala izinambuzane ezonakalisayo ezinje ngeentubi ezinokufuna ukutshintshwa ngokupheleleyo.
Iifowuni zeefestile zeenkuni aziyonto elungileyo yokukhetha ukufuma okanye imozulu enethayo ngaphandle kokuba umnini khaya angazigcina izakhelo rhoqo.
Nangona izakhelo zefestile zomthi zibeka iingozi ezinjalo, amakhaya amaninzi amadala aneefreyimu zomthi eziye zanyamezela ukuvavanywa kwexesha ngenxa yeentlobo zeenkuni ezisetyenzisiweyo kunye nokusikeka komgangatho ophezulu.
Iifreyimu ezenziwe ngeplanga ezenziwe ngomthi zenziwe ngomthi wokwenene njengepayini, imephu, okanye i-oki kwaye zigqunywe ngejekethi yokukhusela eyenziwe ngealuminium, ifayibha, okanye ivinyl.
Isakhelo esingaphandle sigutyungelwe ngezimbo, ngelixa ngaphakathi lihlala lingumthi wendalo ngenkangeleko entle ngaphakathi kwekhaya lakho. Ukubopha kubonelela ngombala ozinzileyo othintela umonakalo kwimozulu engathandekiyo kunye nokonakalisa imitha ye-UV elangeni.
Iifreyimu zeenkuni ezigqityiweyo kufuneka zifakwe ngeembumba zerabha ezingenawo amanzi ezibekwe zijikeleze ukubopha ukuthintela ukungena kwamanzi kunye nokwenza ukuba iinkuni zibole. I-Sills kunye ne-jambs zithambekele koku kunesakhelo sokwenyani.
Nangona iifreyimu ezifakwe iifestile zinokubangela imiba ethile yolondolozo, iinkuni zivumela ukhuseleko olungcono kubushushu obushushu nobandayo.
Faka iifestile zombane ezisebenza ngombane
Iindleko zamakhaya akho zenza isixa esikhulu semali esetyenziswayo ngenyanga, kwaye ukunciphisa ezi ndleko, iifestile ezonga umbane zisisindisi esikhulu semali.
Iifestile ezonga umbane zikwaziwa njengokugcina amandla iifestile, kunye noyilo lwazo kunye nezinto ezenziwe ngazo zinceda ukuthintela umoya oshushu nopholileyo ekubalekeni kwikhaya lakho. Amatyala ombane ayahla ngelixa usenza ikhaya lakho lihlale kamnandi.
Amakhaya aneefestile ezonga amandla ezibhalwe i-Energy Star ngokomyinge we-12% yokonga inyanga nenyanga kwiibhili zombane. (Umthombo: https://www.energystar.gov/products/building_products/residential_windows_doors_and_skylights/benefits )
Ukutshintsha iifestile kwikhaya elinye kunye ne-Energy Star entsha windows iifestile ezimbini kungagcina nangaphezulu; I-21 ukuya kwi-31% isibonelelo senyanga sokufudumeza nokupholisa. Funda iindidi zeempawu zefestile ezingena kwiwindows eyonga amandla.
Ifestile enye yeefestile ineglasi enye kuphela kwisakhelo. Oku akunikezeli ngokwaneleyo isithintelo sokugcina umoya obandayo okanye oshushu.
Iiphaneli ezininzi ezinjengeefestile eziphindwe kabini zeefestile zenziwe ngokubeka iiglasi ezimbini kwiglasi kwisakhelo sefestile enezikhewu phakathi.
Isithuba esiphakathi kweepanishi senza iipokotho zomoya ezitywiniweyo ngexesha lokuvelisa ukunqanda umoya ukuba ungaphumi. Isithuba sizaliswe ziigesi ezahlukeneyo ezinceda ukudala isithintelo esisebenza ngakumbi.
Iifestile ezimbini zeefestile ngokubanzi zibonisa ukuya kuthi ga kwi-90% yamandla ngelixa kungeniswa nge-10%. Beka ngokulula oku kuthetha ukuba kushushu ihlobo i-90% yobushushu bangaphandle buya kuhlala ngaphandle ngelixa i-10% ingena ngaphakathi. Ngenye indlela, ngemini yasebusika ebandayo i-90% yobushushu ngaphakathi kwindlu iya kuhlala ngaphakathi, ngelixa i-10% iza kusaba ngaphandle.
Njengeefestile eziphindwe kabini zeefestile, iifestile ezintathu zineefestile ezintathu zeglasi endaweni yesibini enezikhewu kunye negesi ebekwe ngaphakathi phakathi kweepaneli.
Ezi festile zetafile zintathu zibonelela ngobushushu obushushu nobubandayo ngaphandle kwamaqondo obushushu kwaye zibonelela ngokhuseleko olufanelekileyo ekufudumaleni nakwilahleko yomoya.
Iifestile ezintathu zeefestile zinamandla ngakumbi kunokuba zombini ipaneli enye kunye neefestile eziphindwe kabini. Ifestile yefestile kathathu inokubonisa ukuya kwi-97% yamandla ngelixa ivumela kuphela i-3% ukuba ingene ekhaya.
Oku kuthetha ukuba kushushu ehlotyeni nge-97% yobushushu obuvela ngaphandle buza kuhlala ngaphandle, ngelixa kungena i-3% kuphela. Kwelinye icala, ngemini ebusika ebandayo i-97% yobushushu ngaphakathi kwindlu iya kuhlala ngaphakathi, ngelixa i-3% izakuyekwa ngaphandle.
Iglasi yokuhamba ephantsi, eyaziwa njengeglasi ye-Low-E, isetyenziswa xa kusenziwa amandla iifestile ezonga amandla. Iglasi ephantsi-E inesambatho esincinci esincinci, esincinci kunoboya bomntu bezinto ezingabonakaliyo ezinciphisa ubushushu obuninzi obunokuhamba ngepaneli yeglasi.
Iglasi yokuhamba ephantsi igcina ubushushu ekhayeni lakho ebusika nasemoyeni obandayo ngaphandle, kwaye ngexesha leenyanga ezishushu zasehlotyeni, igcina umoya opholileyo ngaphakathi kunye nomoya oshushu ngaphandle.
Iingubo ze-Low-E zichaphazela indlela ubushushu obuvela elangeni, amandla e-infrared amaza amade, ahamba ngepaneli yeglasi ngaphandle kokuthintela ukukhanya kwelanga ukungena ekhayeni lakho.
Ixabiso le-U linani elibonisa ubungakanani bokulahleka kobushushu kwefestile yeglasi evumelayo. Ixabiso le-U lilinganiswa ngeyure-nganye yeyure, kwaye isezantsi inombolo ukufakwa okungcono kwewindow yeglasi.
I-National Fenestration Ratings Council (NFRC), umbutho ongajonganga nzuzo kumzi-mveliso wefestile, wenze inkqubo yokulinganisa amandla ombane asebenzayo afaka iireyithingi ze-U-Value.
Iifestile eziqinisekisiweyo zeNFRC zineelebheli zeNFRC ezibonelela ngezilinganiso zokusebenzisa amandla ngokwendidi ezininzi. Ukuqonda la manqanaba kunceda abathengi benze ukhetho olufanelekileyo xa bethenga iiwindows.
Olunye udweliso olwenziwe yi-NFRC yi-Solar Heat Gain Coefficient (SHGC). Olu nqanaba lubonisa ubungakanani bobushushu obungena ngefestile kwimitha yelanga.
Njengakwi-U-Value, inani elisezantsi lithetha ubushushu obuncinci obuvunyelwe ngefestile yeglasi. Jonga iwebhusayithi yeNFRC (Umthombo: https://www.nfrc.org/ ngolwazi oluthe kratya malunga nokusebenza kwamandla kwefestile.
Kukho izinto ezongezelelekileyo xa ukhetha iifestile ezintsha ezibandakanya ukhetho olwandisa ukusebenza kwamandla, ukubonelela ngentuthuzelo ekhayeni lakho, kunye nokwenza isimbo yoyilo lekhaya lakho. Apha ngezantsi kukho amanqaku efestile asekhaya kunye nezibonelelo zawo.
Iglasi yamandla aphindwe kabini yi-3.2 mm ubukhulu xa kuthelekiswa neglasi yamandla enye kwi-2.5mm ubukhulu. Iglasi yamandla enye ifunyanwa kwizakhelo zemifanekiso kwaye ayomelele njengeglasi yamandla aphindwe kabini.
Ifestile eyenziwe ngeglasi yamandla aphindwe kabini ayithethi iiphaneli ezimbini zeglasi. Imele iglasi emalunga ne-28% ethe kratya kuneglasi enye.
Iipaneli zeglasi ezincinci zinezigoba kwaye azisoloko zibeka tyaba kwifreyimu yefreyimu ephinda ikhanyise ukukhanya iglasi ibonakale ngathi yiplastikhi enexabiso eliphantsi. Iiglasi ezimbini zeglasi ezomeleleyo zibonelela ngokugquma okungcono, ukuhlala ixesha elide, kunye nokumelana okungcono kukophuka.
Uxolo nokuzola ekhayeni lakho kubalulekile kwaye iifestile zinciphisa izandi ezivela koohola bendlela, oololiwe, iinqwelomoya ngaphezulu, kunye nezinye ingxolo yengqondo. Ukucwangciswa kwefestile nganye kuza neKlasi yokuDlulisa isandi (STC) esetyenziselwa ukulinganisa amandla efestile ukuvimba isandi.
Umbutho waseMelika woVavanyo kunye nezixhobo, ( https://www.astm.org/ (ASTM) yenza iinkqubo ezisemgangathweni kunye nemilinganiselo yokusetyenziswa kwendalo kunye nobunjineli njengamanqanaba okuhambisa isandi efestileni.
Ukulinganiswa okuphezulu kuthetha ukuncitshiswa kwesandi esingcono, kunye nenqanaba eliqhelekileyo lewindows enye yeefestile ukusuka kwi-18-20. Ifestile yefestile ephindwe kabini inyusa ukuhanjiswa kwesandi ukuya kwi-28-32. Isixa somoya phakathi kweefestile eziphindwe kabini kunye neefestile eziphindwe kathathu zichaphazela ukunciphisa ingxolo.
Izithuba ezibanzi phakathi kweepaneli zivimba ingxolo engaphezulu, kwaye indawo encinci ivumela ingxolo ukuba idlule. Iifestile ezikhethekileyo ezingena sandi kunye neepaneli ezimbini zinika olona nciphiso lwengxolo nge-STC engama-48-54 kodwa alunakuphelisa i-100% yengxolo yangaphandle.
Iigridi zokuhombisa zefestile zenza umdla wokwakha kwaye ziyindlela elula yokongeza iindlela ezithile zoyilo ekhayeni lakho.
Indlela iigridi zokuhombisa ezimiselweyo kunye neepateni ezinokuthi zitshintshe ukujonga jikelele kwekhaya. Iigridi ezakhiwe ngeefestile, iigridi phakathi kweglasi, zihlala phakathi kweepaneli zeglasi ngasemva komphezulu wefestile. Oku kukhusela iigridi kumonakalo kwaye kwenza ukucoca kube lula.
I-grill ekwahluliweyo ye-lite yenziwe ngemathiriyeli ebambelela ngaphakathi nangaphandle komphezulu weglasi yeefestile ezibonakala njengezigridi zesikolo esidala kodwa zenziwe ngezinto zangoku ezixhathisa ukonakaliswa yimozulu, ilanga kunye neendawo ezomileyo.
Iigridi zibandakanya izitayile ezinje ngeplati, i-contoured, kunye neepensile (imigca emincinci yegridi) kunye neepateni kubandakanya i-cottage kunye nedayimane. Imibala ayinasiphelo, kwaye abaninimzi banokutshatisa imibala engaphandle kwekhaya labo okanye babonelele ngokuchaseneyo okanye ngokuzalisa iigridi ezinemibala yokuthinta ubugcisa.
Iglasi enomsindo ikwabizwa ngokuba yiglasi ethambileyo kwaye yomelele kuneglasi eqhelekileyo.
Xa iglasi iifestile zinobushushu, iipropathi zeglasi ziyatshintsha ke ukuba iglasi iyaqhekeka iyakuqhekeka ibe ziityhubhu ezincinci ezibutofotofo endaweni yeziqwenga ezijijekileyo ukunciphisa ukwenzakala.
Naziphi iifestile ezinokubakho ngokwaphuka komntu ngaphakathi okanye ngaphandle kwekhaya kufuneka zenziwe ngeglasi enomsindo.
Umbutho weSizwe weGlasi (https://www.glass.org/memberhip/member-benefits/industry-resource-ask-expert-faq) ibonelela ngemigangatho ebonisa ukusetyenziswa kweglasi enomsindo.
• Ifestile ingaphantsi kwe-intshi ezili-18 ngaphezulu komgangatho okanye umhlaba
• Umphezulu wefestile ungaphantsi kweesentimitha ezingama-36 ngaphezulu komgangatho okanye umhlaba
• Ifestile inkulu kune-9 seenyawo iinyawo
• Ifestile ingaphakathi kweesentimitha ezingama-36 zenyawo zendlela
• Nawuphina umnyango owenziwe ngeglasi mawenziwe ngegilasi enobulali njengeminyango yeglasi esliding, iingcango zeshawari kunye neminyango yaseFrance
Ezona ntlobo zixhaphakileyo zokutshintsha iifestile zibandakanya ipaneli enye yeefestile, iifestile zepaneli ezimbini, kunye nezilayida.
Xa ubuyisela iifestile ekhayeni lakho, izimbo, iintlobo, iglasi, izakhelo, kunye nolunye ukhetho zonke izinto ezichaphazela indleko. (https://designingidea.com/replacement-vs-new-construction-windows/)
Uluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo xa ushenxisa iwindow, umndilili usuka kwi- $ 200 ukuya kwi-1600 yeedola kwifestile nganye.
Umzekelo, isilayidi esineglasi yamandla aphindwe kabini kunye nesakhelo sevinyl umndilili weedola ezingama-300- $ 800.00, ngelixa iwindow yebhayi enesakhelo sevinyl iphakathi i-1200- $ 3000.00 ngefestile nganye.
La maxabiso aquka iwindow kunye neendleko zabasebenzi. Ukuthintela ukuhlawula kakhulu ukutshintsha iiwindows, funda ulwazi kwesi sikhokelo, ngakumbi izinto ekufuneka ujonge kuzo efestileni, kwaye uthelekise ubuncinci ubuncikane kathathu kwiikontraka zalapha.
Ngaphandle kwendleko zefestile kunye nomsebenzi, iimeko ezingalindelekanga zinokunyusa indleko yokutshintsha iiwindows ezikhoyo.
Nje ukuba iifestile zisuswe, abafaki banokufumana ukonakala kwesakhiwo esidinga ukulungiswa. Kungafuneka batshintshe isakhelo esele sikhona seefestile ukuze zilungele iiwindow okanye zibenobunzima ekunikezeleni ngefestile esele ikho.
Ukuncipha kwefestile kungadinga ukubekwa kwesinyithi esitsha, kwaye windows efakwe emva ko-1978, kufuneka kwenziwe uvavanyo olukhokelayo kwaye ukuba kufunyenwe isikhokelo, amanyathelo okulungisa anyusa izinga labasebenzi ngokomyinge wama-25% ngefestile nganye.
Izinto eziphambili zefestile sisakhelo, iiglasi zeefestile, naziphi na izixhobo ezifana nesikratshi okanye ukubambelela, isitayile, kunye neendleko zabasebenzi. Ezinye iimeko ezinokunyusa iindleko zeefestile zekhaya elitsha zibandakanya amabali ongezelelweyo.
Ukuba ikhaya lakho linemigangatho emibini okanye emithathu, imigangatho eyongezelelweyo yongeza ubunzima kufakelo, ifuna izixhobo ezifanelekileyo ukufikelela kwindawo yefestile, kunye nabafakeli abongezelelweyo ukuze basebenze kunye. Iikontraki ezimbini zisebenza ngaphandle kokufaka ifestile, kwaye inqanaba lesithathu ifestile ngaphakathi.
Kumakhaya anamabali angaphezu kwelinye, iindleko zizonke zokufakwa kwefestile yasekhaya kunyuka ngama-25 ukuya kuma-50% kwibali ngalinye.
Iindidi zefestile ekuxoxwe ngazo ngasentla zichaphazela indleko yokubuyiselwa kwefestile okanye yofakelo. Uluhlu olungezantsi yimilinganiselo kuphela kwaye luya kutshintsha ngokweendleko zabasebenzi kunye neendlela zokufaka ezifunekayo.
• Kuxhonywe kabini: $ 250-750
• Ukuxhonywa okukodwa: $ 100-400
Isilayidi: $ 300- $ 800
• I-Bay: $ 1,200 - $ 3,000
ICasement: $ 275- $ 650
• Umfanekiso: $ 300 - $ 850
• Umthungo: $ 350- $ 600
Utshintsho: $ 250 - $ 475
• IHopper: $ 240- $ 550
• Ifestile engaphantsi: $ 100- $ 250
Ubungakanani befestile ngokuqinisekileyo buchaphazela ixabiso, kunye neefestile ezigcweleyo ezibiza ngaphezulu kwendlu yangasese okanye ifestile yegumbi lokulala.
Igumbi lokuhlala elinamafestile amakhulu angama-6 'x 6' aphakathi kwama-300- $ 800 ngefestile, kungabandakanywa nabasebenzi. Ukuba iwindow ibandakanya isakhelo esibiza kakhulu okanye iwindow kathathu yeefestile zeendleko, iindleko zinokuba ngumndilili ophakamileyo njenge- $ 1,500 kwifestile enye.
Iifestile zokulala ezisemgangathweni ziza njenge-2 'x 3' kunye ne-3 'x 5' ebiza phakathi kwe- $ 300- $ 500, kwaye amagumbi okulala aphezulu anokubiza ngaphezulu ukuba abandakanya iifestile ezinkulu okanye ezongezelelweyo.
Iifestile ezincinci ezinjengegumbi lokuhlambela kunye neewindows ziqhelekileyo zi-2 'x 1.5 iinyawo kunye no-2' x 3 ', umndilili weedola ezili-150- $ 300 kwiifestile ezisemgangathweni.
Izinto zesakhelo sefestile zichaphazela ixabiso, kodwa le mizinge ixhomekeke kwiindleko zabasebenzi basekuhlaleni nakuphi na ukongezwa kwiifestile.
Apha ngezantsi kukho uluhlu olufutshane lwamaxabiso asemgangathweni ewindow ezinokhetho olufanayo kodwa iintlobo ezahlukeneyo zezakhelo.
Udityaniso: $ 325 - $ 975
• Ukugquma: $ 300 - $ 900
• Umthi: $ 275 - $ 850
• I-fiberglass: $ 200- $ 750
• IVinyl: $ 100- $ 650
• IAluminiyam: $ 175- $ 400
Uhlobo lweglasi luchaphazela amaxabiso efestile, ngakumbi xa uthenga ifestile ngeglasi ephuculweyo xa ithelekiswa neglasi esemgangathweni.
Ukuphuculwa kokhetho lweglasi kubandakanya ezi ntlobo zingezantsi, kwaye amaxabiso exabiso kuzwelonke adweliswe kukhetho ngalunye. Ezi ndleko zeefestile zefestile ezisemgangathweni kuphela kwaye azibandakanyi abasebenzi.
Ubushushu / Ukuchasana nefuthe: $ 13 ipaneli nganye
Igqunyiwe: $ 10- $ 20 kwiphaneli nganye
Ubushushu: $ 12 kwipaneli nganye
Iphindwe kabini: $ 3- $ 6 kwiphaneli nganye
Imilinganiselo yesizwe yabasebenzi xa ufaka iintlobo ezahlukeneyo zefestile zidweliswe ngezantsi. Ezi ndleko zahluka kakhulu ngokwendawo kwaye ziyanda xa iifestile ezikhoyo zifuna ukulungiswa okungalindelekanga okanye uhlengahlengiso.
• I-Double-Hung: $ 200 ngefestile nganye
• I-single-Hung: $ 75- $ 200 kwifestile nganye
Ulungiso kunye noMfanekiso: $ 100- $ 500 kwifestile nganye
Casement: $ 150- $ 900 ngefestile nganye
Isilayidi: $ 100- $ 500 ngefestile nganye
Isiko: $ 200- $ 3,000 ngefestile nganye
• Ngaphantsi: $ 200- $ 350 ngefestile nganye
• I-Egress engaphantsi: $ 1,900 - $ 2,500 ngefestile
• I-Bay: $ 900- $ 4,500 ngefestile nganye
• Ukuqubuda: $ 1,000 - $ 5,500 ngefestile
Ngokwakhiwa kwamakhaya amatsha, abakhi bafaka iifestile ezikhethwe ngumnini-khaya omtsha, kwaye ukulinganisa kuyekelelwe kubakhi.
Kwikhaya esele likhona, ukulinganisa iifestile ukumisela ubungakanani obuchanekileyo bokutshintsha iifestile akunzima, kodwa ukulinganisa ngokufanelekileyo ukumisela ubungakanani obuchanekileyo kubalulekile.
Amanqanaba aliqela eefestile kubandakanya ukutshintshwa kweewindows, izikrini ezintsha zeewindows, kunye neefestile zewindows.
Amanyathelo asisiseko okulinganisa iifestile ngala:
1. Jonga ukuba ifestile isikwere
2. Linganisa ububanzi beglasi ukusuka kwijamb yangaphakathi kwiindawo ezintathu
3. Linganisa ubude beglasi ukusuka kwijamb yangaphakathi kwiindawo ezintathu
Kwiifestile zesaqhwithi, indlela iyafana ngaphandle komlinganiso osetyenzisiweyo kwimilinganiselo yefestile yesiphepho yeyona imfutshane kwezi ndawo zintathu kububanzi nokuphakama ukuze ifestile yefestile ilingane.
Xa ulinganisa izikrini, ukuba kukho isakhelo esele sikhona esifuna ukubekwa endaweni, linganisa isakhelo ngokwaso. Ngefestile engenasikrini, linganisa ububanzi nokuphakama phakathi kwamajelo esikrini, kwaye uthabathe i-1/8 intshi.
Jonga isikhokelo sethu ku ubungakanani bewindows esemgangathweni apha ngolwazi oluthe kratya malunga nobukhulu obudumileyo. Njalo ulinganise ubuncinci kabini ukuqinisekisa ukuba iinombolo zichanekile. Uku-odola iifestile okanye izikrini ezingalinganiyo kunokubiza imali eninzi.
Loluphi uhlobo oluthandayo lweWindows? Sazise kwizimvo ezingezantsi.
Isipho seminyaka esixhenxe somtshato
banexesha elingakanani betshatile ixilongo kunye nomfazi